Horn nke Africa: ihe ọ bụ, àgwà, akụ na ụba na esemokwu | Meteorology netwọkụ
Portillo nke German | 19/11/2021 10:00 | Nkewa
El Mpi nke africa ọ bụ nnukwu mbara ala nke si na mpaghara ọwụwa anyanwụ nke kọntinent Africa pụta. Ọ dị n'agbata Oké Osimiri India n'ebe ọwụwa anyanwụ na Ọwara Aden nke dị n'ebe ugwu, na-agbatị ọtụtụ narị kilomita n'ime Oké Osimiri Arebia. N'ozuzu, a na-eme atụmatụ na Horn nke Africa ga-ekpuchi ebe karịrị 772,200 square kilomita, ọtụtụ n'ime ha nwere obere mmiri ozuzo na ihu igwe kpọrọ nkụ. N'agbanyeghị ọnọdụ obibi ndụ siri ike n'ọtụtụ akụkụ nke mpaghara ahụ, n'oge na-adịbeghị anya, e mere atụmatụ na ndị bi na mpaghara ahụ dị ihe dị ka nde 90,2.
N'isiokwu a, anyị ga-agwa gị ihe niile ịchọrọ ịma gbasara Horn nke Africa, àgwà ya, akụ na ụba na ọchịchọ ịmata ihe.
1 Kedu ihe bụ mpi africa na ebe a na-achọta ya
3 Akụ na ụba na esemokwu na Horn nke Africa
4 Ụnwụ na piracy
Kedu ihe bụ mpi africa na ebe a na-achọta ya
Mpaghara a dị na West Africa, a na-ewerekwa ya dị ka otu n'ime mpaghara ndị kasị daa ogbenye n'ụwa. Agụụ na-eyi ndụ mmadụ egwu mgbe niile. Ekwenyere na nke a bụ ebe mmadụ si malite.
Horn nke Africa dị na ndịda mpaghara mpaghara Afrịka ma bụrụ otu n'ime mpaghara anaghị akwụsi ike n'ụwa. Ọ bụ mba asatọ dị iche iche mejupụtara ya: Eritrea, Ethiopia, Kenya, Somalia, Sudan, Uganda, South Sudan na Djibouti. Ọ bụ mpaghara mmasị maka ike ndị Europe na America n'ihi na ọnọdụ ya dị mkpa maka ịzụ ahịa mmiri, ụgbọ mmiri mmanụ na ibu.
Akpọrọ mpi Africa aha n'ụdị triangular ya. Akụkọ ya sitere na mba Africa dị na Etiopia, Eritera na Yemen, ọ malitere n'etiti narị afọ nke atọ na nke XNUMX. N'oge ochie, a na-ejikwa ya mee ihe dị ka isi iyi nke ihe ndị dị ndụ, site na njem nlegharị anya iji chọpụta myrrh, frankincense, na ngwa nri. A na-ewere mpaghara ugbu a ka ọ nọ n'ọgba aghara ogologo oge. N'agbanyeghị mkpa ndị bi na ya dị, nnukwu agha abụọ weere ọnọdụ n'ebe ahụ, agha dị n'etiti Etiopia na Somalia, na agha dị n'etiti Ethiopia na Eritrea.
Oke mmiri ozuzo ma ọ bụ idei mmiri na-emetụta mpaghara ahụ na nsogbu enyemaka mmadụ na mpaghara ahụ dị oke njọ. N'agbata 1982 na 1992, agụụ na agha a egbuola ihe ruru nde mmadụ abụọ.
Ihe kacha pụta ìhè nke mpi Afrịka bụ ihe ndị a:
Isi ihe dị iche bụ na e nwere ala kpọrọ nkụ na ala dị larịị nke a na-akpọ ugwu Etiopia, nke a na-ekewa ụzọ abụọ site na ndagwurugwu rift.
Ka ọ dị ugbu a, mpi ahụ nwere ọtụtụ ahịhịa ndụ, dị ka ọkụ, ahịhịa, na obere ifuru edo edo nke a na-akpọkarị St. John's wort.
Ọ bụ ezie na ọtụtụ mpaghara ahụ bụ nke kpọrọ nkụ ma ọ bụ kpọrọ nkụ, A na-eji ọtụtụ ugwu na ugwu mara ugwu mgbawa ahụ.
Ogige ugwu Simien bụ otu n'ime ugwu ugwu kachasị na nke kacha mkpa anyị nwere ike ịhụ.
Ọ bụ ezie na ọtụtụ ụmụ anụmanụ na-eji mpaghara a dị ka ebe obibi ha, nchikota nke oke odida obodo na ihu igwe na-emepụta ebe siri ike maka ịmụ nwa.
Enwere ọtụtụ anụ ufe na mpaghara Afrịka karịa n'akụkụ ọ bụla ọzọ na kọntinent Africa.
Ịnweta mmiri bụ ihe mkpali maka anụ ọhịa dị na mbara ọzara, n'ihi na ọtụtụ n'ime mpi Africa na-enweta ntakịrị mmiri ozuzo kwa afọ.
N'akụkụ ọdịda anyanwụ na etiti Etiopia na mpaghara ndịda nke Eritrea. oke mmiri ozuzo nke oge udu mmiri na-abawanye mmiri ozuzo kwa afo.
Ihe mejupụtara mpi Africa bụ mba ndị a: Eritrea, Ethiopia, Kenya, Somalia, Sudan, South Sudan, Uganda na Djibouti.
Akụ na ụba na esemokwu na Horn nke Africa
Nsogbu akụ na ụba dị na mpaghara mpi Africa bụ n'ihi ụkọ mmiri ozuzo na-aga n'ihu na-emetụta ya, kpatara nsogbu nri kacha njọ. obodo ahụ ebiela wee kpatara ụnwụ nri mbụ nke narị afọ nke XNUMX. Ụkọ nri na-eduga n'ọrịa na adịghị anabata ya, na ịnweta ụzọ siri ike na ndị agbata obi na-agbalị ịgbapụ na-eduga na njupụta na nnukwu nsonaazụ.
N'ime mba ndị mejupụtara mpi Afrịka, Etiopia abụrụla mba kachasị mkpa n'ihi ọnọdụ igwe mmadụ, mmepe akụ na ụba ya na ọrụ dị ka onye na-eme ka ọ kwụsie ike na mpaghara ahụ. Ọ bụ obodo nke abụọ kacha nwee ọnụ ọgụgụ mmadụ na mpaghara Afrịka na isi ihe na-akpata nkwụsi ike na mpi Afrịka. Okwesiri ikwu na Etiopia aghọwo n'otu n'ime akụ na ụba na-eto ngwa ngwa na East Africa.
Mpaghara ahụ nọ na nsogbu. Agbụrụ dị iche iche na-asọ mpi maka akụ na ohere. Agha na-aga n'ihu na mpaghara ahụ akpatala ọnwụ ọtụtụ puku mmadụ, nke pụtara na mba ahụ enweghị ụdị ọchịchị mba ọ bụla ga-eduzi ha.
N'ime esemokwu ndị dị na mpaghara, anyị nwere ike ikwu:
Agha Italo-Itiopia mbụ
Agha Italo-Etiopia nke Abụọ
N'oge Agha Ụwa Mbụ, mkpọsa nke East Africa mere na mpi Afrịka; n'oge Agha Ụwa nke Abụọ e nwekwara mkpọsa nke East Africa. Enwekwara esemokwu dị iche iche n'ebe ahụ n'oge a, dịka ọmụmaatụ:
Eritrea Agha nke Onwe
Agha obodo Etiopia
Agha obodo Djibouti
Agha Etiopia na Eritria
Agha obodo Somalia
Ụnwụ na piracy
Edepụtara nsogbu nri na mpi Afrịka dị ka ụnwụ nri na a na-ewere ya dị ka nke kacha njọ kemgbe 1960. Òtù Mba Ndị Dị n'Otu kwupụtara na mpaghara ahụ nọ na njikere na-acha uhie uhie, a ghọtakwara na ihe dị ka otu nde mmadụ nwụrụ n’agụụ. Enweghị enyemaka mba ụwa, nsogbu nchebe mba na esemokwu na-eme ka o sie ike nzaghachi na enyemaka mmadụ ịpụta.
Oké ọkọchị bụ otu n’ime nsogbu ndị bụ́ isi, ebe ụfọdụ mmiri ezobeghị ihe dị ka afọ abụọ. Nke a nwere ike ime ka anụ ụlọ na ihe ọkụkụ efunahụ ya, nke nwere ike ibute ụnwụ nri na ọrịa.
Ndị ọkachamara kwenyere na ọ bụrụ na emeghị ngwa ngwa, ụnwụ ahụ ga-agbasa na mba ndị ọzọ mejupụtara mpi Africa. Ihe oriri na-edozi ahụ, Ọnụ ahịa dị elu nke ngwaahịa ụfọdụ na ntinye aka nke ndị otu nnupụisi etinyela mpaghara ahụ n'ọtụtụ nsogbu kwa ụbọchị.
Nke a bụ nsogbu na egwu na-aga n'ihu na ọrụ mbupu na ịkụ azụ mba ụwa n'ebe ahụ. O ezipụla ndị agha patrol na United States n'aha European Union. Kemgbe 2011, ọ bụ ezie na enweela mbelata, nsogbu ahụ ekpochapụbeghị kpamkpam.
Enwere m olileanya na site na ozi a, ị ga-amụtakwu gbasara Horn nke Africa na njirimara ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Nkewa » Mpi nke africa
Gịnị bụ ike ndọda